Su’aal: Galmo ayaan lacag ka bixiyay, hadana si fiican ma dareensani - Youmo
Jag betalade för sex, och nu känns det inte bra - somaliska
Gabar ayaan lacag siiyay si ey guska iigu dhuuqdo. Wey fiicnayd laakiin si fiican ma dareemin galmada ka dib. Hadda, waxaan la ogayn in cudur galamda laga qaada uu igu dhacay?
Waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay cudur galamda laga qaado. Cudurada qaar oo galmada laga qaado galmada afka ayaa la iskugu gudbin karaa. Waxaad ogaan kartaa inaad qaaday cudur galmada laga qaado haddii aad isa soo baarto. Waxaad iska baari kartaa xarunta dhalinta ama xarun caafimaad.
Waxaad sameysay wax aan la ogoleen markaad gabadha lacag ku siisay iney guska kuu dhuuqdo. Waa dambi islamarkaana ganaax mudan inaad lacag ku bixiso ama wax kale si aad galmo u sameyso. Muhiim ma aha nooca galmada ey tahay. Muhiim ma aha marka ey dhaceyso. Muhiim maaha sida aad ku wada xiriirteen ama haddii aad is garaneyseen.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan qaabab kala duwan oo lacag looga bixiyo galmada. Tusaale, wanaag, farxad leh, ama xaalad adag. Dadka qaar si xun ayey dareemaan galmada ka dib, sida aad adiga sheegtay oo kale. Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in gabadha eysan guska kuu nuugin haddii wax lacag ah aadan siinin.
Ma rabtaa in qof aad kala hadasho haddii aad galma lacag ka bixiso, ama hesho cawimaad si aad u joojiso lacag ka bixinta galmada? U sheeg qofka markaad la kulanto tijaabada ka dib. Sidoo kale caawimaad ayaad heli kartaa haddii aad la xiriirto waaxda adeegyada bulshada ama leenka caawimaadda PrevenTell ama telefoon nambarka 020-667788.
Sidoo kale si fiican ayaad dareemi kartaa haddii aad qof kala hadashid waxyaabah aan ficnayn.
MawduucCuddurada lagu faafiyo galmada